ထူးထူးခြားခြား Google များ | Do
ထူးထူးခြားခြား Google များ
This entry was posted on July 12, 2012, in နည်းပညာ ပို့စ်များ and tagged google. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
1,… သူ့နှလုံးသားကို ထုတ်ပြတဲ့ Google
Google ရဲ့ Search Box ထဲမှာ အောက်က စာသားတွေကို copy ယူထည့်ပြီး Search ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Google က သူ့ရဲ့ နှလုံးသားကို ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ စာသားကို copy မယူချင်သူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီးသွားလို့လည်း
2,… အခြေအခိုင်တော့တဲ့ Google
အခြေမခိုင်ဘူးဆိုတာက Google ကို ဒီအတိုင်း တည်တည်တံ့တံ့ ရပ်မနေတာကို ပြောတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ Google Gravity ဆိုတဲ့ နေရာကတော့ Google ကို အောက်ပြုတ်ကျနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖန်တီထားတဲ့ နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ သိရအောင် Google Gravity ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။
3,… အဝိုင်းခံရတဲ့ Google
Google ကို သူ့ရဲ့ Link တွေနဲ့ စာသားတွေက ဝိုင်းရံပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖန်တီးထားတဲ့ နေရာကတော့ဖြင့် Google Sphere ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
4,… ဂိမ်း Google
Pacman ဂိမ်းကို Logo အဖြစ် ထားရှိတဲ့ Google Site တစ်ခုကတော့ Google Pacman ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့ မျက်နှာစာမှာ Paceman ဂိမ်းကို ကစားကြရအောင်။
5,… ခုန်ပေါက်လာတဲ့ Google စာမျက်နှာ
Google ရဲ့ Search Box ထဲမှာ ” doabarrel roll ” ဆိုတဲ့ စာသားကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို အဲဒီ စာမျက်နှာက ရိုးရိုး ပေါ်မလာဘဲ လည်ပြီးလာတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
6,… စောင်းစောင်းလေး Google
Tilt ဒါမှမဟုတ် Askew ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို Dictionary ထဲမှာ ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါ စောင်းတယ်၊ စွေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကို Google က အပီအပြင် ပုံဖော်ထားပါတယ်။ Google Search Box ထဲမှာ tilt ဒါမှမဟုတ် askew ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအခါ Google က သူ့ရဲ့ဆိုက်ကို စောင်းစောင်းလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နမူနာကြည့်ရန် Titlt …, Askew … ။
7,… ဂစ်တာလေး Google
Google ရဲ့ လက်ရာမြောက် နည်းပညာလို့ ပြောရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ Google က သူ့ရဲ့ Logo ကို ဂစ်တာအဖြစ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ဂစ်တာကလည်း အရုပ်ချည်း သက်သက် ဂစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂစ်တာ ကြိုးလေးတွေကို မောက်လေးနဲ့ လှုပ်ကြည့်လိုက်ရင် အသံလေးတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Google Guitar ကိုသွားရန် …။
« Online ပေါ်မှာ ကာတွန်း ရေးဆွဲချင်သူများအတွက် Websites များ
WordPress တွင် Page အသစ် တည်ဆောက်နည်း »